प्रकाश दाहालप्रति शीर्ष नेताहरुले यसरी दिए सामाजिक सञ्जालमार्फत श्रद्धाञ्जली::– Nepal's Digital Paper
प्रकाशित मिति :आइतवार, मंसिर ३, २०७४ Sunday, November 19th, 2017
काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका छोराको निधनप्रति प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले सामाजिक सञ्जालमार्फत श्रद्धान्जली व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रकाश दाहालको अल्पायुमै निधनको खबरले मर्माहत र स्तब्ध तुल्याएको बताएका छन् ।
“पूर्व प्रधानमन्त्री एवम् मेरा मित्र पुष्पकमल दाहालका छोरा प्रकाश दाहालको अल्पायुमै भएको निधनको खबरले मर्माहत भएको छु । मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धान्जली र
शोकाकुल परिवारजनलाई यस दुखद घडिमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु,” प्रधानमन्त्री देउवाले ट्वीट गर्दै भनेका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री एवं मेरा मित्र पुष्प कमल दाहालका छोरा प्रकाश दाहालको अल्पायुमै भएको निधनको खवरले मर्माहत भएको छु। मृतकप्रति हार्दिक श्रद्घान्जली र शोकाकुल परिवारजनलाई यस दुखद घडिमा हार्दिक समवेदना व्यक्त गर्दछु।
— Sher Bahadur Deuba (@PM_Nepal) November 19, 2017
कांग्रेस नेता गगन थापाले पनि प्रकाश दाहालको निधनप्रति दुख व्यक्त गर्दै श्रद्धान्जली व्यक्त गरेका छन् ।
प्रकाश दाहालको असामयिक निधनले स्तब्ध भएको छु। उनको आत्माको चीर शान्तिको कामना गर्दै हार्दिक श्रद्धाञ्जली व्यक्त गर्दछु!
साथै पुर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल लगायत शोक सन्तप्त परिवारजनमा हार्दिक समवेदना!
— Gagan Thapa (@thapagk) November 19, 2017
त्यसैगरी नयाँ शक्ति पार्टीका संयोजक बाबुराम भट्टराईले पनि प्रकाश दाहालको निधनप्रति दुख व्यक्त गर्दै श्रद्धान्जली व्यक्त गरेका छन् ।
पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सीता दाहालका सुपुत्र प्रकाश दाहालको अल्पायुमै आकस्मिक निधनले स्तव्ध र मर्माहत भएको छु।मृतकप्रति हार्दिक श्रद्धांजली र शोकसन्तप्त परिवारजनमा गहीरो समवेदना प्रकट गर्दछु! pic.twitter.com/djb4BYJBvp
— Baburam Bhattarai (@brb1954) November 19, 2017
राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले पनि सामाजिक सञ्जालमार्फतनै श्रद्धान्जली व्यक्त गरेका छन् ।
पुर्व प्रम पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका सुपुत्र प्रकाश दाहालको आकस्मिक निधनको समाचारले स्तब्ध भएको छु।व्यक्तिगतरुपमा उनि असल मानिस थिए।दिवंगत आत्माको चीरशान्तिको कामना गर्दछु।प्रचण्डजी,सिताजी र सम्पूर्ण दाहाल परिवारमा यो असह्य पिडा सहनसक्ने शक्ति भगवानले प्रदान गरुन।हार्दिक समवेदना pic.twitter.com/wPRXUladUF
— Kamal Thapa (@KTnepal) November 19, 2017
स्वास्थ्य बिग्रिए पनि उपचार गर्न केसी द्धारा अस्वीकार
जुम्लाबाट काठमान्डौ आएर पहिलो पटक यस्तो भने के. सीले (भिडियो)
डा. केसी काठमाण्डौ आउन नमाने पछि प्रहरी मृत्युको हल्ला चलाइयो
विधेयकमा सहमति भएन, संसद् बैठक एक हप्ता पछि स¥यो
जनहितका थुप्रै काम गरियो – मन्त्री घिमिरे